Sahra Macalin oo Gabdho Absame ah u Goodiday! – Rasaasa News
Nov 9, 2009 Jubaland, ONLF, Somali ga, Somaliya
Shir ay isugu yimaadeen gabdhaha Absame ee London, ayaa waxaa hanjabaad aan hore loo arag ka samaysay Sahra Macalin, iyada oo ay aad ula yaabeen gabdhuhu, laguna sigtay in uu gacanqaad dhex maro gumoomiyaha gabdhaha Absame iyo iyada.
Waxaa baryahanba ka socday daafyaha aduunka abaabulo xoog leh oo ay wadeen dadka Absamaha ah, abaabulkaas oo ku aadan xaladaha ka taagan gabalada Jubooyinka oo ay haysato dhibaatooyin xoog leh oo gaar u ah gabaladaas. Gabalada Jubooyinka ayaa waxaa hadheeyey dagaalo iyo baro kacyo ay sababeen dadyow ka yimid gabalo kale oo ku soo duulay gabalada Jubooyinka, gabalkan ayaa waxay xaaladiisu la mid tahay haatan, dhibaatadii 90-kii haystay gabalka Bay oo ahaa gabal ay ku looltamaan maamulkiisa dad ka yimid gabalo kale.
Gablada Jubooyinka ayaa ah gabalka kaliya ee gabalada Somaliya ee ayna haysanin dadkii gabalka u dhashay, waxaana xoog ku haysta dad huwan shaadh diimeed, balse shaadhka u qaatay in ay ku haystaan gabalda Jubooyinka.
Hadaba, waxaa baryahanba si gaar ah uga socday dalka dhaqdhaqaaqyo la doonayo sidii wax loogu qaban lahaa dadka ku nool degan gabalada Jubooyinka, waxaana la qabtay dhawr shir oo hore go,aamana laga soo saaray, waxaa kale oo la doortay gudi ay leeyihiin dadka Absamaha ah.
Dhaqdhaqaayadaas ay wadaan dadka Absamaha ah waxaa lugta jiidayey oo ka soo horjeeday isu imaatinada iyo wax u qabadka dadka ku nool Jubooyinka kooxda uu madaxda u yahay Jwxo-shiil ee ka go,day ururka ONLF. Waxay mamnuuceen oo ay ka hor istaageen dadka Absamaha ah in ay ka soo qaybgalaan kulan balaadhan oo ay beeshu lahayd, iyada oo aan la garanaynin ujeedada ay ka leeyihiin.
Hadab, sida ay warar na soo gaadhayaa sheegayaan, waxaa maalintii sabtida ee bisha November 7, 2009, shir isugu yimid gabdhaha Absame ee degan magaalada London, kulanka gabdhuhu waxay ku martiqaadeen xubno haween oo gaar ah oo la doonayey in ay soo diyaariyaan kulan balaadhan oo ay isugu yimaadaan gabdha Absame si ay u sameeyaan xubno u matala gabalada dalka UK.
Sida ay sheegayaan warar hoose, waxaa kulanka timid iyada oo aan la marti qaadin Sahra Macalin oo ah xaaska Jwxo-shiil [Maxamed Cumar Cismaan], waxayna halkaasi ka samaysay arin fool xun aan la filaynin. Sahro waxay si il adayga ah ugu hanjabtay gabdhihii shirka isugu yimid, iyada oo aad u cadhaysan oo aan la garanaynin waxa ka cadhaysiiyey ayey tidhi ” ma ogolaandoono in la qabto shir aanaan ogayn, waana in la i soo ogaysiiyaa, hadii ay gabdhaha Absame isu imanayaan ONLF-na lagala tashado”.
Hadalkaas ayaa aad uga cadhaysiiyey gabdhihii goobta joogay, gaar ahaan gudoomiyaha gabdhaha Absame, waxayna nacalada dusha kaga tuurtay ururka ay sheegayso Sahro Macalin, iyada oo tidhi gudoomiyuhu “ONLF meeshan laggagama hadlayo, ee waxaa laggaga hadlayaa sidii wax loogu qaban lahaa dadka degan gabalada Jubooyinka, adiguna si khaldan baad ku timid kulanka waayo laguguma casuumin”. “ONLF, iyada ayaa is dishay oo wajiga xabad kaga dhufatay madaxdeedii, shacabkii iyo ururadii kale ee halganka kula jiray, mana maqli karo”, hadaladaasi kolkii ay soo yeedheen ayey Sahro Macalin oo ogaatay shirku wax uu yahay.
Qaar badan oo gabdhaha ah ayaa waxay aad ula yaabeen xishood darada Xaaska Jwxo-shiil, sbabta oo ah labo todobaad ka hor ayey ahayd kolkii Jwxo-shiil, uu soo hor fadhiistay TV Universal, halkaas oo lagu cadeeyey in uu yahay dambiile dilay madaxdii qaaliga ahayd ee ururka ONLF, agoonteeyeyna caruur uu dhalay halgame Dr. Dolal, oo la degan dalka Ingriiska.
Ummada Somaliyeed oo dhan markhaati ayey ka noqotay in uu Jwxo-shiil dambiile yahay, uuna ka dambeeyey dilkii Dr. Dolal. Hadaba, su,aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay sidee ayey Xaaska Jwxo-shiil, inta ay soo horfadhiisato gabdho Absame ah ay waliba ugu hanjabi kartaa iyada oo la ogg yahay wax raaskeeda yaal. Waxay aniga ila tahay in iyada iyo Saygeeduba madaama ay ceebaysan yihiin oo ayna sumacad ku dhex lahayn guud ahaan ummada Somaliyeed gaar ahaana Absame, in ay doonayaan cid ay ku reebaan sumcad xumid haysata.